Banaanbax ka dhacay Buulo Burde & Odayaal la xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Banaanbax ka dhacay Buulo Burde & Odayaal la xiray
Ardaan Yare 3 December 2019
Maanta waxaa degmada buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday Maamulka Hir-Shabeelle kaas oo ay dhigayeen qaar kamid ah dadka ku nool degmadaas.
Banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay isugu soo baxeen wadooyinka degmadaas,iyaga oo banaanbaxooda uga soo horjeeda safar la sheegay in uu degmdaasi ku tegayo Wasiirka Arrimaha gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle.
Wararka laga helayo Buulo Burde ayaa waxaa ay sheegayaan in sidoo kale dadka ay kasoo horjeedaan Maamulka Cusub ee degmadaasi ay u magacaawday Wasaaradda Arrimaha gudaha Hir-Shabeelle, iyaga oo dhagxaan iyo birar ku jaray qaar kamid ah wadooyinka Buulo Burde.
Dhinaca kale Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ee ku sugan degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay Xabsiga dhigeen qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka degmadaas,kuwaas oo kasoo horjeestay Maamulka Hir-Shabeelle.
Odayaasha la xiray oo gaaraya ilaa Saddex ayaa kasoo horjeestay Maamulka Cusub ee degmada Buulo Burde ay dhawaan u soo Magacaawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle,kaas oo uu khilaaf ka taagan yahay.
Nabadoon Cali Cumar Qaansaweyne oo kamid ah waxgaradka degmada Buulo Burde ayaa sheegay Madaxda Hir-Shabeelle ay u sheegeen inaysan aqbaleyn Maamul ay si awood ah ku keenaan Madaxda Hir-Shabeelle.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Madaxda Hir-Shabeelle ay Odayaasha Dhaqanka ku dalbadeen Ciidamada AMISOM,isla markaana ay xireen Ciidamada Jabuuti Odayaal uu isaga ka mid yahay.
10 sano oo ka soo wareegatay qaraxii Hotel Shaamow (WARBIXIN)
Dowladda oo bilaawday Imtixaanka Ruqsad bixinta Nootaayanimada